Torchiere Floor Lamp Factory, mpamatsy - China Torchiere Floor Lamp Manufacturers
Loharano avo lenta avo lenta mamiratra torchiere jiro LED gorodona
antsipirian'ny vokatra: 1. Ity dia jiro gorodona azo ampiasaina amin'ny famakiana, miasa, manjaitra na miala sasatra, azonao atao ny mametraka izany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fatoriana, fianarana na birao.24w 1800 lumen, na jiro na asa jiro. azo atao tsara izany.2. Ny endrika tsotra dia mety amin'ny fomba haingon-trano rehetra.Tsy maninona na maoderina, indostrialy, retro na fomba haingon-trano hafa ny tranonao, dia hifangaro tsara ao anatiny izany. Na dia tsy misy loharanon-jiro hafa aza ny efitranonao, mety ho hazavana lehibe izany...
Jiro gorodona 24W
antsipiriany momba ny vokatra: 1. Ity dia jiro azo apetraka na aiza na aiza ao an-tranonao, na ny efitra fandraisam-bahiny, ny efitrano fatoriana na ny fianarana.8.6 santimetatra ny lohany Φ, 1800 lumen ary ambony indrindra 6500K kelvin, miasa tsara na dia ao amin'ny efitrano tsy misy jiro valin-drihana. .2. Miaraka amin'ny loha mitongilana 350 °, azonao atao ny manitsy ny làlan'ny hazavana amin'ny sitraponao na dia tsy misy gooseneck aza. ...
30W Sky LED Modern Torchiere Super Bright Floor Lamp
antsipirian'ny vokatra: 1. 8.66 santimetatra ny lohany Φ ,68.89 santimetatra ny haavony, avo dia avo mahazava ny efitrano iray manontolo.Ary miaraka amin'ny loha mitongilana 270° malefaka, azonao atao ny manitsy ny toeran'ny hazavana amin'ny lalana tianao.2. Smooth touch switch manome anao traikefa mikasika tsara kokoa.Stepless dimming, azonao atao ny manitsy ny jiro tianao araka ny filan'ny sehatra. Ampidino ny jiro mamiratra indrindra rehefa mamaky ianao ary manjavozavo rehefa vonona ny hatory ianao , mameno ny filanao eo amin'ny fiainana.3....